Ramos Oo Ku Biiraya Manchester United Haddii….. – Garsoore Sports
Ramos Oo Ku…
Daafacii dhowaan ka tegay kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa koox la’aan ah wuxuuna isha ku hayaa inuu si xor ah ugu biiro Paris Saint-Germain xagaagan laakiin wuxuu Manchester United ka dhigtay qorshihiisa labaad ee liiska kooxaha uu doonayo.
Halyeeyga 35 jirka ah ayaa ka tagay Madrid kaddib 16 sano oo uu la joogay Real Madrid, waxaana uu haatan raadinayaa guri cusub, iyadoo kooxo badan ay doonayaan inay soo xerogeliyaan ciyaaryahan ay dad badani u arkeen inuu yahay mid ka mid ah daafacyada-dhexe ee ugu fiican.
Liiska kooxa doonaya Ramos ayaa ka walaacsab inay bixiyaan mushaharkiisa qaaliga ah. sida laga soo xigtay AS ( Sport Witness), waa PSG kooxda usoo bandhigtay dalabkii ugu fiicnaa.
Ramos ayaa haatan la fahamsan yahay inuu riixayo inuu ku biiro kooxda Faransiiska, laakiin waxaa jira caqabado dhowr ah oo hortaagan, waxaa kamid ah xiisaha ay PSG u qabto saaxiibkiisii hore ee Real Madrid Raphael Varane.
PSG ayaa ceyrsaneysa Varane xagaagan waxaana laga yaabaa inay ka doorbidaan Ramos, kaasoo si weyn ugu dhibtooday dhaawacyo xilli ciyaareedkii hore, waxaana muuqata inuu ku dhow yahay dhammaadka mustaqbalkiisa.
Haddii PSG ay la wareegto Varane, Ramos waxa uu raadinayaa u dhaqaaqista Premier League-ga, halkaas oo uu u arko in Manchester United ay tahay meesha ugu soo jiidashada badan dhammaan kooxaha xiiseeynaya.